Sideed ku soo degeysaa MV-22 Osprey?
Sideed ku soo degeysaa MV-22 Osprey? Bilood 3 6 maalmood ka hor #1749
Isku day dhammaan.
Marka waxaan jecelahay inaan isticmaalo boggan 'Bell MV-22 Osprey' ee boggan, laakiin dhibaato ayaan qabaa.
Markii aan isku dayo inaan si toos ah u soo dego, wuxuu galaa qaab is-xakameyn aan la xakamayn karin oo u eg oo kale oo ah sidii kan loo yaqaan 'bagjaw aaff'. Wax fikir ah kama haysto sababta ay sidan u sameeyaan. Waxay u muuqataa oo keliya inay ka dhacdo meel u dhow dhulka markii aan si qunyar socod ah u socdo, AKA: dhulkoo aad u kacsan (si fiican, iskuday).
Ma jiraa qof wax u raadinaya tan?
Tafatirka ugu dambeeya: Waxaa qoray ND40X.